Ny lahatsoratr'i Nina Ritz momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Nina Ritz
Nina dia mpikaroka teknika ary mpanoratra ao DesignRush, tsena B2B mampifandray marika amin'ireo masoivoho. Tiany ny mizara ny zavatra niainany sy ny atiny misy heviny izay manabe sy manome aingam-panahy ny olona. Ny tena tanjony dia ny famolavolana tranonkala sy ny marketing. Amin'ny fotoana malalaka ananany, rehefa lavitra ny solosaina izy dia tia manao yoga sy mitaingina bisikileta.
Ahoana ny fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po amin'ny alàlan'ny poketra nomerika
Alakamisy, May 28, 2020 Alakamisy, May 28, 2020 Nina Ritz
Ny tahan'ny fiovam-poana finday dia maneho ny isan-jaton'ny olona nisafidy ny hampiasa ny rindranasa finday / tranokala voavolavola finday, avy amin'ny totalin'ireo natolotra. Ity isa ity dia hilaza aminao ny hatsaran'ny fampielezanao finday ary, amin'ny fijerena ny antsipiriany, ny zavatra tokony hatsaraina. Mpivarotra varotra e-varotra mahomby maro no mahita fa mitotongana ny tombom-barotra azon'izy ireo raha ny mpampiasa finday no resahina. Ny tahan'ny fandaozana ny sarety fiantsenana dia avo lenta amin'ny tranokala finday, ary raha izany ianao